Kulanka Kalfadhiga 2,aad Ee Golaha Hawlfulinta DDSI Sanadka 2008TI - Cakaara News
Kulanka Kalfadhiga 2,aad Ee Golaha Hawlfulinta DDSI Sanadka 2008TI
Jigjiga(CN) Khamiis, 15ka October 2015, kulanka kalfadhiga 2,aad ee golaha hawlfulinta DDSI sanadka 2008TI ayaa saaka kadhacay hoolka shirarka ee xafiiska madaxwaynaha.
kalfadhigan oo ay hogaaminayeen hogaaminta sare ee xukuumada oo ay kamid yihiin madaxwaynaha DDSI mudane Cabdi Maxamuud Cumar, madaxwayne kuxigeenka ahna wasiirka waxbarashada mudane Mowliid Haayir iyo madaxa xarunta dhexe lehna awood madaxwayne kuxigeen mudane Cabdicasiis Maxamed ayaa soo hordhigay golaha ajandaha lagaga wada hadlayo kulankan oo ahaa dib u eegista qaab dhismeedka qaar kamid ah xafiisyada heer deegaan.
Hadaba, falanqayn iyo dood dheer oo gurigu kayeeshay qodobka kalfadhigan kadib ayuu wuxuu goluhu codbuuxa ku ansixiyay in qaab dhismeedyada qaar kamid ah xafiisyada heer deegaan oo iskuraran lakala qaado, qaar kalana wax laga badalo iyo in waliba wax lagu soo daro. sidan ayuuna goluhu u habeeyay:
Xafiiska Xidhiidhka Arimaha Dawlada Dhaqanka iyo Dalxiiska DDSI waxaa loo kala qaaday laba xafiis oo kala ah:
1.Xafiiska Dhaqanka iyo Dalxiiska DDSI iyo
2.Xafiiska Xidhiidhka Arimaha Dawlada DDSI
Komishinka Sportga DDSI waxaa laga dhigay Xafiiska Sportiga iyo Dhalinyarada DDSI.
Xafiiska Arimaha Haweenka Caruurta iyo Dhalinyarada DDSI waxaa laga dhigay Xafiiska Haweenka iyo Caruurta DDSI.
Xafiiska Xoolaha Beeraha iyo Horumarinta reer miyigana waxaa lagadhigay laba waaxood oo kala ah: Waaxda Xoolaha iyo Waaxda Beeraha oo mid waliba miisaaniyad gaar ah iyo kuxigeen gaar u ah leh balse xafiiska uun ah.
Sidoo kale, waxaa wax laga badalay Mashruucii Waraabka Galbeedka Godey oo laga dhigay Mashruuca Waraabka Gobolka Shabeele oo hoos imanaya Xafiiska Horumarinta Waraabka iyo Dooxooyinka balse noqonaya mashruuc gooni utaagan. waxaana loo sameeyay gudi dajisa qaab dhismeedka mashruucan. Waxaana gudigan gudoomiye ka ah marwo Maajida Maxamed Maxamuud-wasiirka Xafiiska kobcinta iyo adeega shacabka iyadoo ay gudigan xubno kanoqonayaan mudane Suldaankhayre-wasiirka xafiiska horumarinta waraabka iyo dooxooyinka, mudane Cabdinuur Colaw Axmed-wasiir kuxigeenka xafiiska xoolaha beeraha iyo horumarinta reer miyiga iyo mudane Axmed Cabdi Maxamed-wasiirka maaliyada.
Ugudanbayna, Wuxuu goluhu cod buuxa ku ansixiyay in lagu soo daro heer deegaan Wakaalada Damaanadqaadka Cuntada oo aan horay uga jirin deegaanka.